Kuthetha ukuthini ukuphupha iimbotyi? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
1 Ukuphupha iimbotyi
2 Ngaba ukuphupha iimbotyi kuyinto elungileyo?
3 Iimbotyi ezimnyama
4 Ukutya iimbotyi
5 Ukuphupha iimbotyi kwindawo yokutyala
6 Iinkozo zembotyi
7 Iimbotyi ezimbi
8 Ngaba ngumqondiso olungileyo?
Isondlo sisidima kwaye ukuphupha iimbotyi luphawu olucacileyo lokuba amaxesha amnandi ayeza. Iinjongo zakho ziya kwenza ukuba amaphupha azaliseke kwaye wonke umntu okujikelezile uya kulubona utshintsho. Eli phupha libonisa ukuba iingxaki ziya kukuvumela ukuba ukhule, oko kukuthi, uvele kwiindawo ezahlukeneyo.
Okokuqala, kubalulekile ukukhankanya ukuba eli phupha aliyi kuba nentsingiselo efanayo kuye wonke umntu ophuphayo. Esi silumkiso sibalulekile ukubonisa ukuba akufuneki uphelelwe lithemba okanye ucinge ukuba umqondiso uya kuba mnye kuphela. Iposti iya kubonisa ukuba inokuba yinto elungileyo okanye nokuba yinto embi, yonke into iya kuxhomekeka kuwe kuphela.
Ngaba ukuphupha iimbotyi kuyinto elungileyo?
Intsingiselo yeli phupha izisa ubunzulu kunye nokuzazi okunomdla. Ukuphupha iimbotyi kuzisa ukulingana kuluntu lonke, ke ayinamsebenzi nokuba usisityebi okanye ulihlwempu, kuba wonke umntu uyatya. Into ephambili kukuba uqonde ukuba eli phupha linento yokwenza nonxibelelwano kunye nokuzala.
Ubudlelwane obukhulu enabo nabantu abaphuphileyo ngabo kukukhankanya ukuba bunento yokwenza nemali okanye nobomi bobuqu. Zama ukunqanda utyalomali olutsha kwaye ukholelwe kwisakhono sakho sokusombulula yonke into ngokukhawuleza. Kubalulekile ukuqhubela phambili kwaye ngaphezulu kwako konke ukukholelwa ekubeni yonke into izakulunga.
Eli phupha libonisa ukuba ufuna ukuziva ethangeni lomntu osondele kakhulu kuwe, ke nikela ingqalelo. I-hug ingayisombulula imeko yakho, kodwa kuya kufuneka isuke kwisiqingatha sakho esingcono okanye uthando lwakho. Akukho mahluko phakathi kwezi zimbini kwaye eyona nto inomdla kukuba oku kufuneka kwenziwe ngokungxamisekileyo.
Ukuphupha iimbotyi ezimnyama luphawu lwesidingo, ke zama ukunxibelelana naba bantu kwaye kungcono kungekudala. Zama ukuhlala kufutshane naba bantu kwaye uphephe ukulwa okanye nokuxabana kangangoko, kuba kubi. Ukuba ufunda ukuba nako ukuxolela abanye, iya kuba yinto ebhetele kuwe.
Utshintsho luyakwenza ukuba ube ngumntu ongcono, Oko kukuthi, uya kuguquka kakhulu. Ukuphupha iimbotyi ezityiwe nguwe kubonisa ithuba elihle lotshintsho olukhulu. Inokuvela esixekweni, ebumelwaneni, esitratweni okanye nasemsebenzini, eyona nto iphambili kukudityaniswa kuwo wonke lo mbandela.
Zama ukulandela ikhondo elifanayo kwaye uphephe ukufuna ukunyanzela olu tshintsho, kuba iyakuba yinto embi kakhulu kuwe. Into ephambili ayikunyanzeli nantoni na, kuba izinto kufuneka zenzeke ngokwendalo kwaye hayi ngendlela "yomgunyathi". Ukuba unakho ukukwazi ukwenza oku, iya kuba yinto elunge ngakumbi kubomi bakho, kuba iya kuzisa ukuzithemba.
Ukuphupha iimbotyi kwindawo yokutyala
Eli phupha lifanelwe ziintsingiselo ezahlukeneyo, ke kubalulekile ukuba unike ingqalelo kuzo zonke iinkcukacha. Ukuba iinkozo ziyantshula, luphawu lwempumelelo oluza kuza kungekudala. Kuya kufuneka unikele ingqalelo kwaye ngaphezulu kwako konke uphephe uloyiko, kuba ithuba liya kuba likhethekileyo
Ukuba ukutyala kubi, luphawu olucacileyo lokuba uya kuba neengxaki kwaye ubunzima buza kukuhlasela. Ingxaki kuya kufuneka ijongane ngqo nawe kwaye ubaleke kuyo ayisoze ibe yinto enokuthenjwa. Zama ukuya kwicala eliqolileyo, usoloko ukunqanda uloyiko kunye nokungaqiniseki okubi.
Eli phupha lineentsingiselo ezintathu ezahlukeneyo kwaye ngaxeshanye bayazigqibezela, ke kubalulekile ukuba unikele ingqalelo. Ukuphupha iimbotyi zikwimeko elungileyo luphawu lokuba usendleleni elungileyo kwaye kufuneka uyilandele. Ukuba iinkozo zikwimeko embi, luphawu olukhulu lokuba kufuneka ukhathalele impilo yakho.
Indlela yesithathu kukuba iinkozo zifile kwaye ukuba kunjalo, kulungile ukufuna ulwazi ngokwakho ukusombulula iingxaki. Eyona nto iphambili kukufuna ukuqonda okungaphezulu kwe- amandla loo nto inengqondo yakho. Zama ukucinga ngayo yonke le nto kwaye wenze umboniso, kuba imeko engcono yobomi iya kuba kuyo.
Ukuba uphuphe eli phupha, luphawu lokuba kuya kufuneka unike ingqalelo enkulu ngakumbi kwindlela otya ngayo. Ezinye iingxaki zinokubangela ukuba ube sempilweni kwaye eli nqaku linomdla.
Iimbotyi ezimbi ziluphawu olukhulu lwesidingo sokuzama ukutya ngcono. Thatha eli phupha njengendlela yokufumana ubomi obungcono, oko kukuthi, ukuba sempilweni.
Ngaba ngumqondiso olungileyo?
Nantoni na eye yaqatshelwa ngaphambili luphawu olucacileyo lokuchuma, kuba ilindele ingxaki. Ukuphupha iimbotyi zomzimba kakuhle ekuqhubekekeni kobomi bakho ngokubanzi. Zama ukuzazi ngcono, kuba kumaxesha alandelayo uya kuzilungisa ngaphambi kokuba yenzeke.